Fanatsarana ny toekarena sy ny fitantanam-bola Mbola sarotra sy ady mafy
Nezahana nampifanarahana tamin’ireo vaindohan-draharaha vaovao araka izay voalaza ao amin’ny Politika ankapoben’ny Fanjakana (PGE) ny Tetibolam-panjakana nasiana fanitsiana 2019.
Eo amin’ny sehatry ny tetibola, tohizana ny ezaka amin’ny fampitomboana ny vola miditra amin’ny fanjakana. Hatreto aloha, ho sahirana ny fanjakana ary tena miantehitra mafy amin’ny famatsiam-bola avy any ivelany na dia nolazaina aza fa tsy dia ilaina izany tamin’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra. Efa maromaro ihany ny famatsiam-bola nosoniavina saingy kely raha oharina amin’ireo velirano sy vina nampanantenaina sy ketrehana hotanterahana. Ankoatra izay, ambetin-dresaka ihany koa ny fampitomboana ny vola miditra eny amin’ireo vondrom-paritra eny ifotony amin’ny alalan’ny fiantohana ireo vola azo avy amin’ny harena voajanahary ary ny fandraisana an-tanana miandalana ny asa fihariana tsy manara-dalàna mba hiditra eo amin’ny sehatry ny ara-dalàna. Mbola ezaka be ihany koa ny amin’izany satria mainka miroborobo be ny sehatra tsy ara-dalàna amin’izao fotoana ary vao tsy ela akory no nampiaka-peo ireo mpisehatra ara-dalàna amin’ny harena voajanahary fa maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna hita. Voalaza ao anaty PGE ihany koa fa hohamafisina ireo fanaraha-maso mialoha sy aorian’ny fampiasana sy fandaniana ny volam-panjakana mba hamongorana ny kolikoly sy ny hosoka. Hatreto aloha dia ny fanenjehana ireo tompon’andraikitra maro isan-karazany teo aloha no tena mafotaka ary maro hatrany ny dosie mivoaka tsikelikely. Vao tamin’ny faran’ny herinandro teo no voasaringotra tamin’ny fanodinkodinam-bola ireo tompon’andraikitra 4 teo aloha eo anivon’ny fadin-tseranana. Mivoaka sempotra ny fanjakana ny amin’ny hampandrosoana ny sehatra toekarena sy ny fifehezana io fitantanam-bola io. Tsy mbola misy zavatra hita mivaingana mipaka amin’ny vahoaka madinika hatreto fa mbola miaina sinema sy fampielezan-kevitra foana izy ireo.